Futuracha Pro, karazana fanoratana tany am-boalohany izay miova rehefa manoratra | Famoronana an-tserasera
Hatramin'ny Gresy taloha, ny foto-kevitry ny typografika dia noraisina toy ny izany kanto afaka misolo tena lahatsoratra izany, amin'ny alàlan'ny fisafidianana endri-tsoratra sy asa fanaovana pirinty
Misy fomba maromaro amin'ny fanomezana anarana typografia ary na dia voalaza tao amin'ny fehintsoratra teo aloha aza ny famaritana azy dia hiresaka momba ny Karazana 4 misy.
1 Karazan-tsarimihetsika samihafa
1.1 Fanovana typography
1.2 Typografika famoronana
1.3 Karazan-tsoratra micro na typeface amin'ny antsipiriany
1.4 Typografia makro
2 Futuracha Pro: The Typography vaovao
3 Manova endrika rehefa manoratra!
4 Betsaka ny olona mahalala an'i Futuracha!
Mampivondrona ireo fanontaniana izany typoáficas mifandraika amin'ny fianakaviana, ny haben'ny litera, ny elanelana misy eo amin'ny litera sy ny teny
Ity dia mihevitra ny fifandraisana ho toy ny fanoharana amin'ny fahitana, izay tsy vitan'ny hoe manana fampiasa amin'ny fiteny fotsiny ny lahatsoratra ary indraindray aseho an-tsary, toy ny hoe sary.
Karazan-tsoratra micro na typeface amin'ny antsipiriany
Sambany izy io no nampiharina tamina singa toy ny litera, ny elanelana misy eo amin'ny litera, ny teny, ny elanelana misy eo amin'ny teny, ny elanelan'ny tsipika ary ny tsanganana.
Mifantoka amin'ny typeface, ny fomban'ireo taratasy ary ny vatan'ilay taratasy izy.
Futuracha Pro: The Typography vaovao
Efa resaka faharanitan-tsaina sy haitao be dia be hampivelatra ireo fironana vaovao ireo rehefa misolo tena ny lahatsoratra. Isika olombelona dia maniry hatrany ny hanome taratra ny tena manokana sy marina amin'izay rehetra ataontsika sy miaraka amintsika Futuracha, tsy hanavakavaka izahay.
Araka ny hita ao amin'ny tranonkala, ny endrika amaritana an'i Futuracha dia miaraka amin'ny "kinova endritsoratraón voaravaka aingam-panahyón zavakanto-déco an'ny muse tsy ampoizina: ny kalalao Karaiba".
Na izany aza, toa somary tsy dia mazava loatra ny mahatakatra fa ny fandikana ho an'ny olona iray izay mahalala ny foto-kevitra momba ny Futuracha voalohany, fa miaraka amin'ny fotoana sy ny sary, ny votoatin'ny famoronana azy dia takatra bebe kokoa.
Manova endrika rehefa manoratra!
Nilaza ny mpamorona azy fa rehefa mihabetsaka ny lahatsoratra mivoaka, typeface ityímety kokoa amin'ny endrika fampisehoanaón mahafinaritra ny maso ary maneho ny hevi-dehibe momba ny typeface. Ary toy ny hoe tsy ampy izany dia mbola mamela anao tsy miteny ny hevitry ny mpamorona mihitsy: «Futuracha, tsy haikoóIzy io dia manana firavaka, fa isan-karazany amin'izy ireo no azo isafidianana. Apetaho miaraka amin'ny fampiasa ny famoronana, milalao alohan'ny toro-lalana ary fanandramana.ón alohan'ny boky torolàlana".
Amin'ity fanambarana teo aloha ity, ny tompona sy mpanoratra ny sonia typografika, dia mampitaha ny tenany amin'ireo kinova hafa amin'ny fifaninanana ary mampahafantatra fa tena marina ny tetikasany Futuracha.
Betsaka ny olona mahalala an'i Futuracha!
Any amin'ny firenena 120 mahery, ity typeface vaovaoía Efa alaina izany ary ao an-tsaina, ny zavatra manaitra indrindra momba an'ity foto-kevitra fanoratana ity dia ny fanitsiana ny atiny rehefa manoratra na manitsy azy. Na izany aza tsy mijanona eo daholo ny zava-drehetra! Efa maro ireo rindranasa ekena sy logo marobe izay nanomboka niasa tamin'ny volavolainy niaraka tamin'i Futuracha ary ankehitriny manana portfolio logo manokana nanao fisaorana an'ity typeface ity.
Ny olona tena mahay mamorona dia ireo izay mahazo tombony betsaka amin'ity fitaovana ity, tsy isalasalana. Izy io dia heverin'ny mpamorona sary malaza maro, iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanoratana ny endrik'ireo lahatsoratrao ary omeo heviny mifanaraka mifanaraka amin'ny andian-teny tsirairay soratanao izy ireo.
Aza mijanona tsy manandrana! Na izany na tsy izany, raha tsy fialam-boly ataonao ny manoratra amin'ny endritsoratra hafa dia aza misalasala mipetraka ary mieritreritra fa mety mila azy ianao indraindray. misy mpizara aoíNea sanatria indray andro any dia te hijanona eo ianao ary hamono fotoana kely. Fa ny tena marina dia miaraka amin'ity typografika vaovao ity dia hihamaro hatrany ny foto-kevitra isan-karazany sy sarotra.
Futuracha dia hita hatraiza hatraiza, toy ny tamin'ny andro voalohany nanirahana ny mpamorona azy hamorona endrika amina lohahevitra iray ary nahazo tsindrimandryó amin'ny kalalao roa Karaiba Nijery kilasy fanoharana aho. Aingam-panahy avy amin'ny "ny antennae sy ny spikes ny tongony.«
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Futuracha Pro, karazan-tsoratra am-boalohany izay miova rehefa manoratra ianao